Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment सुतेको सुतै यसरी जानसक्छ ज्यान... - Pnpkhabar.com
सुतेको सुतै यसरी जानसक्छ ज्यान…
एजेन्सी : पछिल्लो समय सुतेकै अवस्थामा मृत फेला पर्ने घटनाहरु बढेका छन् जसलाई चिकित्सक सडेन कार्डियाक डेथ भन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा कुनै समस्या नदेखिए पनि मुटुमा हुने समस्याका कारण यसरी अचानक व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।
‘मुटुको विद्युतीय प्रणाली (चाल) मा गढबडी र रक्त सञ्चारको अवरोधका कारणले सडेन कार्डियाक डेथ हुने गर्छ,’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालाले भने ‘सडेन कार्डियाक डेथमा १÷२ घण्टामा व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ ।’डा. प्रभा चापागाईं कोइरालाका अनुसार यस्तो घटनामा एक घण्टाभित्र व्यक्तिको मृत्यु हुने भएकाले समयमै जानकारी पाए बचाउन सकिने भए पनि सुतेको अवस्थामा व्यक्ति अचेत हुने र परिवारका सदस्यले थाहा नपाउँदा उपचारको प्रक्रियामा पु¥याउनु अगाडि नै मृत्यु हुने बताउँछन् ।
सडेन कार्डियाक डेथ भएको खण्डमा तुरुन्त कार्डियो सिपिआर गरेर व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ । तर एक घण्टाभित्र उपचार नगरे मृत्यु हुने डा. कोइरालाले बताए । चिकित्सकका अनुसार पहिल्यै मुटुका समस्या भएकालाई वा कारणै थाहा नभइकन पनि अचानक मृत्यु हुनसक्छ । मुटुले काम गर्न छोडेपछि मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार नभएर मस्तिष्कले अक्सिजन नपाउँदा मस्तिष्कको मृत्यु हुने वीर अस्पताल मेडिसिन विभागका उपप्राध्यापक फिजिसियन डा. भवेश थापा बताउँछन् । मस्तिष्कको मृत्यु हुनुलाई मेडिकल भाषामा ब्रेन डेथ भनिन्छ । मुटुले सामान्यतया एक मिनेटमा ६० देखि सय पटक पम्प गर्नुपर्छ । मस्तिष्कभित्रको रक्तनली फुटे पक्षघात हुन्छ ।
सोडियम, क्याल्सियम र पोटासियमको गडबडीजस्ता कारणले अचानक मुटुको चाल बन्द भएर सडेन कार्डियाक डेथ हुने बताउँछन्, डा. सुशील मोहन भट्टराई ।मुटुको चाल बन्द भएको तीन मिनेट भित्र पुनः मुटु सुचारु नहुने हो भने मस्तिष्कमा रगत र अक्सिजन नपुगेर करिब तीन मिनेटभित्र मस्तिष्कको मृत्यु हुने उनले बताए । अचानक टाउकोको रक्तसञ्चार बन्द हुँदा पक्षघात हुने र रक्तसञ्चारमा अचानक कमी आउँदा र रक्तसञ्चार नली फुटेर अचानक रक्त सञ्चारमा अवरोध आउँदा ब्रेन सर्ट डाउन हुने डा. भट्टराईले बताए । रक्तसञ्चारमा अचानक कमी आउने वा रक्तसञ्चार नली फुटेर अचानक रक्त सञ्चारमा अवरोध आउँदा मस्तिष्कको मृत्यु हुन्छ । जसलाई मेडिकल भाषामा स्ट्रोक भनिन्छ ।
सामान्यतया बिहानको समयमा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिए पनि यही कारणले बिहानको समयमा धेरैको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन नभएको चिकित्सकको भनाइ छ । विशेषगरी जाडोको मौसममा बिहानीको समयमा व्यक्तिको बढी मृत्यु हुने देखिए पनि सडेन कार्डियाक डेथ भने बिहानकै समयमा हुन्छ भन्न नहुने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालाले बताए । बिहानको समयमा एकचोटी मुटु र मस्तिष्कमा बढी लोड (भार) पर्ने भएकाले बिहानको समयमा सडेन डेथ हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
अकस्मात मृत्यु हुने कारण भेन्ट्रिकुलर टैकि कार्डिया र भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन पनि हुन् । मुटुका समस्या वंशाणुगत रुपमा, मुटुका धमनीमा बोसोको मात्रा धेरै वा जम्ने, मुटुका दीर्घरोगीमा सडेन कार्डियाक डेथको जोखिम हुने बताउँछन्, चिकित्सक । चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिमा चुरोट सेवन नगर्ने व्यक्तिको तुलनामा सडेन डेथको जोखिम तेब्बर हुने कार्डियोलोजिष्ट डा.कोइरालाले बताए ।चिकित्सकका अनुसार उच्च रक्तचाप पनि सडेनडेथको मुख्य कारण हो । त्यसैले उच्च रक्तचापको समयमै उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ । डाइबेटिज, कोलेस्ट्रोल, मोटोपना, व्यायामको कमीले समेत जोखिम हुन्छ ।
कार्डियो मायोप्याथिमा मुटुको मांशपेशी बाक्लो भएर ज्यान जाने जोखिम हुन्छ भने मुटु नै ठूलो भएर (डाइलेट) पनि मृत्युको जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन् । मुटुको भल्भसम्बन्धी गडबडीका कारण पनि ज्यान जाने जोखिम हुन्छ,जसलाई मेडिकल भाषामा भल्भकुलर हार्ट डिजिज भनिन्छ । मुटुको नसा अकस्मात छुट्टिँदा जोखिम हुन्छ, मुटुको नसा छुट्टिनुलार्ई डिसेक्सन भनिन्छ । विभिन्न किसिमका रोगको कारणले पनि मुटुको नसामा गडबडी भएर समस्या हुन्छ । त्यसैले रोगको पहिचान गरेर बेलैमा सडेन डेथ हुनबाट बच्नुपर्ने बताउँछन्,चिकित्सक ।
अमेरिकामा वर्षेनि करिब ४ लाख व्यक्तिको सडेन कार्डियाक डेथ हुने गरेको बताउँछिन्, कार्डियोलोजिष्ट डा.कोइराला । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हजारजना पुरुषमध्ये दुईजनाको सडेन कार्डियाक डेथ हुने गरेको छ भने हजार महिलामध्ये एकजनामा सडेन कार्डियाक डेथ हुने गरेको छ । सडेन कार्डियाक डेथको जोखिम महिलामा भन्दा पुरुषमा धेरै हुने देखिन्छ । करिब ३० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुष मुटुको समस्या भएर उपचार गर्न अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।
हट्अट्याक भएर एनजिओप्लाष्टिक गरेर उपचार गरिनेको संख्या पनि पनि बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार विशेषगरी उच्च रक्तचाप, चिनीरोगको समस्या, हरियो साग सब्जी र फलफूलको कमीले नेपालमा मुटु रोगको समस्या देखिएको बताउँछिन्, कोर्डियोलोजिष्ट डा.कोइराला ।